Kaspersky — MYSTERY ZILLION
May 2008 edited June 2008 in Antivirus & Virus
Hey Mysterryzillion's brothers and sister, Is it notagood idea to tell about kaspersky antivirus blacklisted??\_:D/
Star Lay ရေ ကြိုဆိုပါတယ် ကွယ်............
အဲ့ ဒီအမွှေတော် kaspersky အကြာင်းကို MZ ရဲ့
http://www.mysteryzillion.com/forums/showthread.php?t=48&highlight=Kaspersky မှာ ကြည့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လွယ်လွယ်လေး အရင် ဦးဆုံး software ကို Install လုပ် ဒါပြီး Key ကို install လုပ် .. အဲဒီ ကီး က 2009 ထိ
လိုင်စင်ရတယ်ပေါ့ အဲဒီလိုဆိုရင် .. Update လုပ်ရင် တိုက်ရိုက် update မလုပ်နဲ့ Zip file ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး
မှ အဲဒီ့ Zip file ကို ဖြေချပြီးမှ အဲဒီ ဖြေချထားတဲ့ folder ကို update လမ်းကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းပြီးလုပ် .. ဒါဆို၇င်
အဆင်ပြေမယ် ..ဒါမှမဟုတ်ပဲ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်၇င် BLACK LIST FILE ဆိုပြီး လုံး၀ ၇မှာ မဟုတ်ဘူး
ကျွှန်တော်ဆို၇င် 7.0 သုံးနေတယ် အထက်က ကျွှန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း သုံးတယ် လုံး၀အဆင်ပြေတယ် ..
ကျွန်တော်မေးတာကိုဘယ်သူမှပြန်မဖြေလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ အခုမှပဲစိတ်ချမ်းသာသွားတော့တယ်:65: ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးနော်။:77: ကျွန်တော်အခု key အသစ်ရပြီဗျ။ update လုပ်ရင် blacklisted မဖြစ်တော့ဘူး။:67: လိုချင်သူများ ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ပြီးတော့ ပထမတစ်ခါ post လုပ်တုန်ကရပြီး အခုအသစ်ရေးမလို့ရှာနေတာ ရွာလည်နေပြီ။ ဘယ်ကသွားရေးရမလဆိုတာပြောပေးကြပါဗျို့။:((
ကိုStar ရေ . . .
kasper ကကျွန်တော် အလကားသုံးဖို့ ဇာတာ မပါဘူးထင်တယ်။ ဘယ်လိုမှ သုံးမရဘူး။ ကီးနဲ့ ။ ကျွန်တော်သုံးရင် black list ဖြစ်ရင်ဖြစ် မဖြစ်ရင် ဒီ version အတွက်မဟုတ်ဘူးပြောနေတယ်။
post အသစ်တင်တာက အစကကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ နောက်ပိုင်းကြမှ သိလာတာ။ အသစ်တင်ချင်ရင် Forum Jump ကနေ၀င်ပြီး သက်ဆိုင်ခေါင်းစဉ်အောက်က post ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီမှာ စရေးပေါ့။
ကျွန်တော်ရေးထားတာမရှင်းမရှင်း ဖြစ်သွားတယ် sorry နော်။ အခု key က version6အတွက်ဗျ။ ကို yeman က kaspersky internet security နဲ့ရောအဆင်ပြေမလားမသိဘူး။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ KIS နဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျ။ ဒီလိုမှမဟုတ်လည်း http://www.kavkiskey.com/download ကိုသွားကြည့်ပြီး key တွေ စိတ်ရှိလက်ရှိ download ပေတော့။ ကျွန်တော်တော့ update တင်တိုင်းရင်တမမ ဖြစ်နေရတယ်။ ဘယ်တော့များ blacklisted ဖြစ်သွားမလဲလို့။ ဒါနဲ့ NOD32 version3က kaspersky7ကိုတောင်ယှဉ် နိုင်တယ်လို့ internet journal မှာရေးထားတယ်ဗျ။ kaspersky မရတော့ရင်တော့ NOD32 version3ပဲရအောင်ရှာပြီးသုံးတော့မယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ရေးထားတာမရှင်းမရှင်း ဖြစ်သွားတယ် http://www.kavkiskey.com/download ကိုသွားကြည့်ပြီး key တွေ စိတ်ရှိလက်ရှိ download ပေတော့။ ကျွန်တော်တော့ update တင်တိုင်းရင်တမမ ဖြစ်နေရတယ်။ ဘယ်တော့များ blacklisted ဖြစ်သွားမလဲလို့။ ဒါနဲ့ NOD32 version3က kaspersky7ကိုတောင်ယှဉ် နိုင်တယ်လို့ internet journal မှာရေးထားတယ်ဗျ။ kaspersky မရတော့ရင်တော့ NOD32 version3ပဲရအောင်ရှာပြီးသုံးတော့မယ်ဗျာ။
virus တွေပေါများလာတာ နှိမ်နှင်းဖို့ anti virus တွေကိုသုံးလားတယ်...
နှိမ်နှင်းမဲ့နည်းလမ်းက ကတော့ General နဲ့ special ဆိုပြီးခွဲကြည့်တယ်...
General အလိုက် နှိမ်နှင်း ရာမှတော့ kaspersky ကကောင်းဆုံးပါပဲ...
IT Pro သမားတွေက kaspersky ထားသုံးစွဲနေကြတုံးပါ။သူ့ရဲ့နည်းလမ်းအလိုက် ကောင်းတယ်.
ဒီနေရာမှာ အားလုံးကောင်းတယ်တော့ မဆိုပါဘူး၊
NOD32 ကတော့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်... server ထိုင်ပြီးသုံးရင်
General ကရလာတဲ့ အဖြေ (Virus) အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး
နှိမ်နှင်းတဲ့ နည်းကို သုံးပါတယ်.. အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပဲ
kaspersky မနိုင်တဲ့ Virus တွေရှိပါတယ်..
IT Pro ကတော့ special နည်းလမ်းကို အသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်.
kaspersky ကို နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ သုံးကြည့်ပါ...
ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်... ချစ်စွာသော